किन सधैं विवादमा रहन्छ एनआरएन अमेरिका ? - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
किन सधैं विवादमा रहन्छ एनआरएन अमेरिका ?
२०७५-१०-९ बिचार / प्रतिक्रिया
'डंकिन डोनट्स’मा बसेर कफी खाँदै गर्दा एक जना मित्रसँग एनआरएन अमेरिकाको सदस्यतासम्बन्धी प्रसंग चल्यो । उनले भने हामी घडीको घण्टीको भरमा घण्टा हान्नेले २० डलर तिरेर एनआरएनको सदस्यता किन लिने ? अमेरिकामा भएका नेपाली संघसंस्थामध्ये सबैभन्दा विवादित बनाइएको संस्था कुनै छ भने त्यो हो– एनआरएन अमेरिका हो ? सदस्यता वितरणदेखि निर्वाचन प्रक्रिया सधैं विवादित बनाइन्छ । निर्वाचनको नतिजापश्चात् सधैं नजिताविरुद्ध कानुनी झमेलामा अल्झाइन्छ । विश्वमै सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको भनिएको एनआरएन अमेरिकाको पदाधिकारी उम्मेदवार एनआरएनको निर्वाचनमा लज्जास्पद तरिकाले हार्दछन्। यस्तो फुट र गुटको राजनीतिमा अल्झेको संस्थाको सदस्यता लिनुको औचित्य के ? एनआरएन अभियन्ता हुँ भन्नेहरुबीच नै सौहार्दता, सहकार्यता, आत्मीयता एवम् एकता कायम गर्न नसकेको संस्थाले कसरी कायम राख्ला तीन लाख बढी अमेरिका निवासी नेपालीको सम्बद्धता ? एक छिन, म अवाक् भए । साँच्चिकै म जस्ता श्रमजीवीहरुले किन लिने त सदस्यता ?
म किन बन्ने त एनआरएन अमेरिकाको सदस्य ? हिजोआज सामाजिक सञ्जालमा यो प्रश्न निकै भाइरल भएको छ । किनकि यतिबेला एनआरएन अमेरिकाको मेम्बरसिप ड्राइभ खुलेको छ । सायद फेब्रुअरी १५ अगावै सदस्य बनिसक्नु पर्नेछ, अन्य कुरा यथावत रहेमा । मेरा मित्रले राखेको प्रश्नहरुको उत्तर दिने या बहस गर्ने क्षमता म राख्दिन । एनआरएन अमेरिकाका अभियन्ताहरुले यसको सम्बोधन पक्कै गर्नुहोला । म कसैलाई यी कारणले सदस्यता लेऊ या ती कारणले सदस्यता नलेऊ भन्न सक्ने सामथ्र्य पनि राख्दिन । तथापि म यी विश्वासले सदस्यता लिँदै छु । तपाईं विचार गर्नुहोस् भन्न चाहिं पक्कै सक्छु । पहिलो, म पनि अमेरिकी नेपाली समुदायको एउटा महत्वपूर्ण सदस्य हुँ । समुदायमा मेरो पनि सम्बद्धता हुनुपर्दछ । मेरो सहकार्यता रहन्छ, तसर्थ यसको स्वामित्व लिन म सदस्यता लिनेछु । दोस्रो, यो विदेशी भूमिमा नेपाली समुदायको ऐक्यबद्धता जीवन्त र ओजपूर्ण छ भन्ने सन्देश स्थानीय जनता र संस्थाहरुसमक्ष पु¥याउनका निम्ति म र म जस्ता नेपालीको सदस्यताको अङ्कगणित अपरिहार्य छ । यसका निम्ति तपाईं–हाम्रो सहभागिता जरुरी छ । तेस्रो, नेपाल र नेपालीलाई जोड्न साझा सेतुका रुपमा एनआरएन अमेरिकाको भूमिका जीवन्त बनाउनुपर्दछ । हामी सबै फुटेर होइन जुटेर नेपाली कला, संस्कृति र परम्परागत विशेषताहरुको सम्बद्र्धन गर्दै दोस्रो पुस्ताबीच, नेपालीबीच सधैं एकता हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश दिन अत्यावश्यक छ । यो अभियानमा एनआरएन अमेरिका अहिलेसम्म कति सफल–असफल छ । यसको बहस गर्नै पर्दछ । चौथो, प्रवासी नेपाली र मातृभूमि नेपाल जोड्ने सेतुका रुपमा एनआरएन रहेको छ । तसर्थ, नेपालीका हैसियतले प्रवासवासीले पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न एवम् नेपालीको हैसियतले प्रवासबाट नेपाल र नेपालीका लागि गर्न सकिने कामको सम्भाव्यतालाई जीवन्त राख्न पनि यो संस्थाप्रति सबै प्रवासी नेपाली जिम्मेवार बन्नुपर्ने हुन्छ । र पाँचौं, जबसम्म तपाईं सदस्य रहनु हुन्न, नैतिक रुपमा यो संस्थालाई गुण र दोषका आधारमा प्रशंसा र आलोचना गर्ने नैतिक आधार रहँदैन ।
आशा गरौं– प्रशंसा गर्ने थुप्रै अवसर आगामी दिनमा एनआरएन अमेरिकाले हामीलाई दिनेछ । भलै यो अवसर दिएन भने पनि तीव्र आलोचना गर्ने नैतिक जिम्मेवारी त हामी सदस्यको सधैं रहनेछ । यी सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हामी सबै नेपालीको साझा संस्था हो । यसमा हामी सबै सहभागी भई यसलाई सधैं प्रवासी नेपालीको हित, अधिकार, र नेपालीको पहिचान कायम राख्न तथा प्रवासवासीबीच एकता र सम्बद्धतताको सन्देश दिनका निम्ति पनि हामी सबैको सहभागिता जरुरी छ ।
यति धेरै सम्भावना बोकेको एनआरएन अमेरिका कि सबैको प्रिय संगठन बन्न सकेन ? यसमा भने छलफल जरुरी देखिन्छ । सधैं नै किन यसको विरोध मात्र भइरहन्छ ? यहाँ एउटा प्रसंग जोड्न सान्दर्भिक लाग्यो । सिटी युनिभर्सिटी अफ न्यूयोर्कको एक कलेजमा समाजशास्त्र विषयअन्तर्गत ‘जात र जातीयता’को कक्षा पढाउँदै गर्दा भएको अन्तरक्रियामा मेरा एक अफ्रिकन–अमेरिकन विद्यार्थीले भने– ‘मेरो छिमेकमा कोही श्वेत वर्ण भएको नयाँ मानिस आयो भने मलाई खासै त्रास या अप्ठ्यारो महसुस हँुदैन तर कोही अश्वेत वर्णको अपरिचित मानिस आयो भने मेरो मनमा अनेक कुरा खेल्दछ, शंका एवम् त्रासले मन भारी हुन्छ र झ्यालबाट लुकेर देखिञ्जेलसम्म चियाउने गर्दछु ।’ मैले प्रतिप्रश्न गरे, किन यस्तो ? उनले सहज उत्तर दिए, ‘मैले जतिबेलादेखि समाज र मानिस बुझ्न थालें, सबै ठाउँमा यानिकी स्कूल, साथीभाइ, सब–वे, पत्रपत्रिका–न्यूज, सामाजिक सञ्जाल जताजतै अश्वेत वर्णका मानिस अरुभन्दा अलिक खराब हुन्छन् भन्ने कुरा बुझाइयो या बुझें । समाजले कहिल्यै राम्रो भनेन । अश्वेत वर्णका मानिसले गरेका राम्रा कुराको चर्चा भएन या गर्न जानेन ।’ ठीक अहिले अमेरिकामा एनआरएनको अवस्था मैले यस्तै देखेको छु, बुझेको छु । हुन त मेरो अमेरिका बसाइमा केबल तेस्रो वसन्त पार गर्दै छ । यसर्थ, एनआरएन अमेरिकाको बारेमा मेरो बुझाइ सही नहुन पनि सक्छ । तर, ती मेरा विद्यार्थीले भनेजस्तो चोकदेखि चिया पसल, सब–वेदेखि समाज र पत्रपत्रिकादेखि सामाजिक सञ्जालमा एनआरएन अमेरिकाको बारेमा सदैव नकारात्मक टिप्पणी मात्रै सुनेको छु, पढेको छु । अधिकांश यो संस्थाको विरोध मात्रै गर्दछन् । किन छ यस्तो अवस्था ? यो बहसको विषय छ ।
अन्त्यमा, एनआरएन–अमेरिका आम अमेरिकावासी नेपालीको अपेक्षाअनुरुपको कार्य सम्पादन गर्न भने पक्कै चुकेको होला । कयौं नीतिगत, कार्यगत एवम् व्यस्थापकीय कमजोरी भएकै होलान् । आम सदस्यहरुको चाहनाअनुरुपको कार्यक्रम पनि ल्याउन नसकेकै होला । सम्पादन गरेका केही काममा पनि जवाफदेहिता एवम् पारदर्शिताको कसीमा केही शिथिलता देखाएकै होला । अझ ठूलो कमजोरी त समग्रमा आफूले गरेको राम्रा कामको सूचना प्रवाह आम सदस्यबीच प्रभावकारी सम्प्रेषण गर्न नसकेको होला । आम समुदायबाट पनि सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी धेरै हुने भएकाले पनि यो संस्थाप्रति सकारात्मक भावनाको खरेडी परेको होला । यति हुँदाहँुदै पनि एनआरएन अमेरिकाले निकै राम्रा काम गरेका छन्, गर्दै होला । नेपालीको हैसियतले प्रवासी नेपालीले पाउने अधिकारका लागि गरेको प्रयास, विभिन्न च्याप्टरले गरेका विभिन्न पहल जस्तै नेपाली भाषामा शिक्षार्थी परमिट परीक्षा, हेल्प डेस्कजस्ता प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा एनआरएन अमेरिकाको प्रयास प्रशंसनीय नै छन् । मुख्यतः निर्वाचन प्रक्रियालाई विवादरहित बनाउँदै एक कार्यकालमा हरेक च्याप्टरले कम्तीमा एउटा मात्र गर्व गर्नलायक काम गर्न सक्यो भने ती पदाधिकारीको कार्यकाल सफल भएको मान्न सकिन्छ । आशा गरौं, आगामी दिनमा एनआरएन अमेरिका नेपाली डायस्पोराको सुखदुःखको सारथी हो भन्ने सन्देश ठोस कार्यक्रममार्फत सबै सदस्यलाई दिनेछ ।